Sida loo arko shirkadaha ay marin u helaan xogtaada barta Instagram | Androidsis
Asturnaantu waa wax walaac ku leh adeegsadayaasha koontada 'Instagram'. Sidaa darteed, codsigu wuxuu na siinayaa qalab taxane ah oo aan ku ilaalinayno asturnaanta iyo amniga, sida loo arko logins in isku mid ah. Hadda hawl cusub ayaa la soo saaray, taas oo noo oggolaanaysa inaan si wanaagsan u maamulno asturnaanta iyo xogta aan wadaagno.
Xaaladdan oo kale, waa shaqo kuu oggolaanaysa inaad aragto waxa shirkadaha iyo codsiyada waxay heli karaan xogteena On Instagram. Hab wanaagsan oo lagu caddeeyo cidda aan la wadaageyno xogtan koontadeena. Maxaa noo ogolaanaya inaan sameyno inay jiraan shirkado aan marin u lahayn iyaga.
Waxay ahayd wax la filayay muddo dheer, ugu yaraan adeegsadeyaal badan ayaa filayay in lagu soo bandhigo arjiga, laakiin ugu dambaynti waa rasmi. Waa qayb cusub, oo loo qaabeeyey si aan u maamuli karno iyo xakamaynta cidda marin u leh xogta shakhsiga in aan ku wadaagno shabakadda bulshada ee caanka ah. Marka si fiican ayaan u ogaan karnaa cidda aragta xogtaan, si aan tallaabo uga qaadno.
Sida loo dejiyo ogeysiisyada Instagram
Xakamaynta xogta shakhsiga ah waa wax dadka isticmaala barta Instagram aad u qiimeeyaan. Sidaa darteed, soo bandhigidda cabir sidan oo kale ah waxay ahayd wax la jeclaa. Tan iyo isticmaalayaasha waa kuwa raba inay gacanta ku hayaan shaqsiyan ku saabsan xogtooda, si loo go'aansado waxa iyaga lagu sameeyo iyo cidda marin u heli karta iyo cidda aan samayn karin. Hadda laga bilaabo waxaan awood badan ku leenahay arrintan.
Eeg cidda ka galeysa macluumaadkaaga shaqsi barta 'Instagram'
Codsiyada sida Instagram, laakiin sidoo kale kuwa kale sida Twitter ama Facebook, waa wax iska caadi ah fasax siiso adeeg ama dalab, in habkan aad ku heli karto xogteenna, si aad hawl gaar ah u qaban karto. Hawshan cusub ayaa durba si rasmi ah loogu hawlgeliyay shabakadda bulshada, sida shirkadda lafteeda ay ku shaacisay bayaan ay soo dhigtay boggeeda. Haddii aad tahay isticmaale beta, markaa horeyba waad u heli lahayd, taas oo ku jirta goobaha arjiga.
Marka hore waa inaan ku furnaa arjiga taleefoonkeena Android. Ka dib waxaan ku galnaa muuqaalkeena dhexdeeda oo waxaan gujineynaa astaanta saddexda xarig ee jiifka ah, oo ku yaal qaybta midig ee sare ee shaashadda. Laga soo bilaabo xulashooyinka ka muuqda menu-ka waa inaan galno qaabeynta, oo u muuqata dhinaca hoose ee shaashadda. Goobaha arjiga waa inaan galnaa qaybta amniga.
Qeybtaan amniga Instagram waxaan ku arki doonnaa inay jiraan qayb cusub. Waxaa loo yaqaan 'Apps and Website', kaas oo ah midka aan u soconno inaan ku galno waqtigan. Haddii aan firfircooneyno, taas oo ah mid ka mid ah labada ikhtiyaar ee qaybtaan, waxaan arki karnaa barnaamijyada, shirkadaha ama websaydhada hadda marin u heli kara xogtayada. Marka waxaan leenahay fikrad cad habkan ku saabsan waxa dhaca. Intaas waxaa sii dheer, waxaan tallaabo ka qaadi karnaa arrintan.
Sida loo arko xiisaha xayeysiinta Instagram
Maaddaama haddii ay jiraan shirkado ama codsiyo aanan dooneyno inaan marin u helno xogteenna, wax baan qaban karnaa. Instagram waxay na siineysaa suurtagalnimada Ka qaad marinkan xogta shakhsiga ah. Waan baabi'in karnaa dhammaan kuwa aanan daneyneyn kiiskan, sidaas darteed waa hab wanaagsan oo lagu maareeyo xogta shaqsiyadeed ee shabakadda bulshada. Maaddaama ay u badan tahay inay jiraan qaar aynaan xiiseyneyn ama aan ku kalsooneyn. Markaa waxbaan ka qaban karnaa iyaga.
Shaqadan ayaa horay loogu soo bandhigay arjiga Instagram. In kasta oo haddii aad rabto aad sidoo kale geli karto shabakadda, link this. Dhexdeeda waxaa suurtogal ah inaad ku aragto isbeddelladan nabadgelyada oo aad ka saarto marin u helidda adeegyadaas, codsiyada ama shirkadaha aadan rabin inaad marin u hesho xogtaada shakhsiyeed ee shabakadda bulshada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo arko shirkadaha galaangalka xogtaada barta Instagram
Sida loo isticmaalo EMUI Smart Data Saver ee Huawei